Xiaomi patents mobile nke nwere ogwe igwe n’azụ | Gam akporosis
Xiaomi patenti ekwentị nwere ogwe aka ya n’azụ
Xiaomi bụ otu n'ime ụdị ọrụ kachasị taa, nke na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụdị taa, dị ka nke ha gbara akwụkwọ ụbọchị ole na ole gara aga. The ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ọhụrụ ụdị, dị ka e leaked ekele a ọhụrụ patent. Nzube nke ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị na nke ndị China na-achọ iji uru nke azụ nke ekwentị.
Ebe ọ bụ na n'okwu a anyị na-ahụ a ama nwere anyanwụ panel na azụ. Yabụ Xiaomi na-achọ ịnye ihe dị iche maka ndị ọrụ. Na mgbakwunye na iji uru nke azụ ekwentị, nke bụ akụkụ a na-anaghị ejikarị eme ihe.
Echiche dị na nke a bụ na ekwentị Xiaomi a jiri ogwe igwe a iji na-akpaghị aka. Yabụ ndị ọrụ ga - enwe batrị yana ezigbo nnwere onwe na ekwentị. Kpamkpam ihe dị mkpa na nke na-efu na ọtụtụ ekwentị.
Obi abụọ bụ ụzọ ahụ kwuru, anyanwụ panel ga-etinye n'ọrụ na ekwentị. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike iche na ọkpụrụkpụ nke ekwentị ka ukwuu na nke a, na mgbakwunye na ịme mgbagwoju anya na imepụta na imepụta nke otu, na-etinye njikọ dị mkpa na ya.
Ọ bụ ya mere, enwere obi abụọ banyere atụmatụ Xiaomi na nke a. The Chinese ika nwere ike ẹkedori a ekwentị na ahịa, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ naanị a patent na nke ha na-egosi anyị ihe echiche nke na-agaghị emezu mgbe e mesịrị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na-atọ ụtọ ịhụ ihe akara ndị China zubere na ha na-achọ ịpụ na nkịtị.
Ọ bụrụ na ọ malite, anyị na-enwe obi abụọ na ọ ga-adị njikere afọ a, ya mere anyị ga-echere ma ọ dịkarịa ala ruo 2020. Anyị ga-ege ntị nke ọma maka nkọwapụta nke ikike ikike Xiaomi a na mmalite ahịa ya. Obi ekwentị na-akwụ ụgwọ na akpaghị aka bụ ihe ọtụtụ chọrọ, yabụ anyị ga-ahụ ma ọ bịarute n'ụlọ ahịa n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ na ọ gaghị abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi patenti ekwentị nwere ogwe aka ya n’azụ
Galaxy Watch nọ n'ọrụ 2: Samsung elekere ọhụụ bụ gọọmentị